ယခုနှစ် မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတွင် တည်းခိုဆောင် လုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရ - Yangon Media Group
ယခုနှစ် မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲတွင် တည်းခိုဆောင် လုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရ
မင်းဘူး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂
မန်းရွှေ စက်တော်ဘုရားကြီးတွင် ယခင်နှစ်များက ဘုရားပွဲတော်ကာလတွင် တည်းခိုဆောင် (တဲကျောင်း) လုပ်ငန်းရှင်များအား မင်းဘူးခရိုင်အတွင်းသာ တင်ဒါချပေးခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်ဘုရားပွဲတော်ချိန်တွင် တည်းခိုဆောင် (တဲကျောင်း) လုပ်ငန်းများအား တစ်နိုင်ငံလုံးရှိစိတ်ဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လျှောက်လွှာများလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှု ရေးဝန်ကြီး၊ မန်းရွှေစက်တော်ဘုရား လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ ခင်မောင်အေးက ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ ရက်တွင်ပြောကြားသည်။
”အရင်တုန်းကတော့ တဲကျောင်း တင်ဒါပေးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မင်းဘူးခရိုင်အတွင်းက လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ပဲပေးခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးက မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲ တော်ကာလ တဲကျောင်းလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကို လျှောက်လွှာလက်ခံမှာပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံးက စိတ်ဝင်စားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကို လုပ်ခွင့်ပေးရင် ပိုပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလာမှာပါ။ ပြီးတော့ လျှောက်လွှာများများလက်ခံတော့ ဘုရား ကြီးအတွက် အလှူငွေတိုးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောကြားသည်။ တဲကျောင်းများအား တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူမဲပေါက်သူပေးမည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်တဲကျောင်းလုပ်ငန်းရရှိလုပ်ကိုင်ခဲ့သူများမှ ၎င်းတို့ အား ဦးစားပေးချပေးရန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အား စာတင်၍ တောင်းဆိုမှုများရှိသော်လည်း တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအနေဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်များတောင်းဆိုထားသည်မှာမ ဖြစ်နိုင်ဟုသိရသည်။
”တဲကျောင်းလုပ်ငန်းတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးက စိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကို လျှောက်ထားခွင့်ပေးပြီး မဲပေါက်လို့လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့ရင် နှစ်စဉ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဒေသခံတဲ ကျောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ အခက်တွေ့ နိုင်တယ်။ ရွှေစက်တော်ဘုရားကြီးကို မှီခိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ စကု၊ ငဖဲ၊ မင်းဘူး၊ မကွေးစတဲ့မြို့နယ်တွေက ဒေသခံ ပြည်သူတွေလည်း အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်”ဟု ရွှေစက်တော်တည်းခိုဆောင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ကိုဝင်းမင်းလတ်က ပြောကြားသည်။ မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲ တော်ကာလတွင် ဘုရားဖူးလာပြည် သူများတည်းခိုရန်အတွက် နှစ်စဉ် တဲကျောင်း ၁၃ဝဝ ခန့်ဆောက်ရ ပြီး ဘုရားပွဲတော်ကြီးသည် တပို့တွဲလဆန်း ၅ ရက်မှ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်အထိ ရက်ပေါင်း ၇၅ ရက်ကျင်းပသည့် ပွဲတော်ကြီးဖြစ်သည်။
မြန်မာ့မြေယာပေါ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား အချို့ ဝင်ရောက် စိုက်ပျိုးနေသောကြောင့် မြေပိုင်ရှင??
ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း ပီပီပြင်ပြင် မဆောင်ရွက်နိုင် မီးတွေပျက်နေဟ??